I-China Inikezela ngedivayisi yokusika eyi-30Khz ye-Ultrasound Yokusika Isandla KukaRobot Kusetshenziswa Ukwenza Nokukhiqiza | Qianrong
Ukunikezela nge-30Khz Ultrasound Cutting Device yeRobot's Cutting Hand Usebenzisa
Into Cha QR-C30Y
Isisindo seBlade 1.25kgs
Isisindo esikhulu 11.5Kg
Isicelo Umsiki wendwangu
Umgomo wommese wokusika we-ultrasonic ukuguqula i-50 / 60Hz yamanje ibe amandla kagesi angama-20, 30 noma ama-40kHz ngokusebenzisa i-generator ye-ultrasonic. Amandla kagesi aguqulwa amaza aphezulu aphinde aguqulwe abe ukudlidliza kwemishini kwemvamisa efanayo nge-transducer, bese kuthi ukudlidliza kwemishini kudluliselwe kummese wokusika ngesethi yedivayisi ye-amplitude modulator engaguqula ubukhulu. Isisiki senjoloba se-ultrasonic sidlidliza ngobude baso nge-amplitude ka-10-70μm, siphinda izikhathi ezingama-30,000 (30 kHz) ngomzuzwana (ukudlidliza kwekhasi kuyinto encane, okuvame ukuba nzima ukuyibona ngamehlo enyama). Ummese wokusika ube usudlulisela amandla okudlidliza atholakalayo endaweni yokusika yomsebenzi ozosikwa. Kule ndawo, amandla okudlidliza asetshenziselwa ukusika injoloba ngokwenza kusebenze amandla wamangqamuzana erabha nokuvula uchungechunge lwamangqamuzana.
Izici zokusika ummese ezisika ngomshini
1. Kulula ukusebenzisa ekukhiqizeni okuzenzakalelayo.
2. 1mm blade inokulahleka okuncane kwempahla.
3. Ijubane elisheshayo, ukusebenza kahle okuphezulu futhi akukho ukungcola.
4. Ukunemba okusikiwe kuphezulu, futhi impahla yenjoloba ayikhubazekile.
5. Indawo yokusika inobushelelezi obuhle nokusebenza okuhle kokubopha.
6. Imishini incane ngosayizi futhi ingasetshenziselwa ukusika okuphathwa ngesandla.
1. Ukuzinza okuphezulu: I-generator ye-ultrasonic ikhiqiza ukudlidliza kwe-electromagnetic lapho isebenza, futhi ikuguqula kube yi-oscillation yemishini bese ikudlulisela kwimimese yokusika nezinto zokusika. Ukusika okwenziwa ngomshini kuyenziwa, ngakho-ke akukho mkhawulo wokusika obukhali odingekayo, futhi ukugqoka kwensimbi kuncane, futhi ngasikhathi sinye Inhloko yokusika ingashintshwa ngokwayo.
2. Ukuphepha nokuvikelwa kwemvelo: Lapho ummese we-ultrasonic usikiwe, izinga lokushisa kwekhanda lokusika liphansi kune-50 degrees Celsius, futhi akukho ntuthu nephunga elizokwenziwa, eliqeda ingozi yokulimala nomlilo ngesikhathi sokusika.
3. Ukusika kahle: Njengoba igagasi le-ultrasonic lisikwa ngokudlidliza okuvama kakhulu, okokusebenza ngeke kuhambisane nobuso bensimbi, kudingeka ingcindezi encane ukusika, futhi izinto ezintekenteke nezithambile azikhubekanga futhi azigqokwa, nendwangu iyasikwa bese ivalwa ngokuzenzekelayo. Ngeke kubangele ukusika.
4. Ukusebenza okulula: ummese wokusika uxhunywe ku-generator ye-ultrasonic, i-generator ixhunywe kuma-220V mains, futhi inkinobho ingasikwa ukuxhasa ukusika okuphethwe ngesandla nokufakwa ngomshini.
Langaphambilini Isandla Esiphethwe i-40khz i-Ultrasonic Ukudla umsiki Nge-Generator Yedijithali Ayikho I-Knife Yokunamathela
Olandelayo: Umsiki we-Ultrasonic onemvamisa engu-35Khz yokusika izinto ezihlanganayo ezahlukahlukene